खुसि हुन् के लागेका थिए उदाहरणीय जोडी विक्रम र मनुलाई फेरी भयो ब ज्रपात ! – Gazabkonews
खुसि हुन् के लागेका थिए उदाहरणीय जोडी विक्रम र मनुलाई फेरी भयो ब ज्रपात !
खुसि हुन् के लागेका थिए उदाहरणीय जोडी विक्रम र मनुलाई फेरी भयो ब ज्र पात, सहयोग जुटाएर बाँचेको यो जोडीको रक्षा गर प्रभु, बिक्रम तिमी छिट्टै
ह्विल चियर छाडृर आफ्नै खुट्टाले हिँड्न सक्ने बन भन्दै भक्कानिए सहयोगी मनहरु, बिक्रम र मनुको पनि थामिएन आँशु, हेर्नुहोस् भिडियो
विश्वकै उदाहरणीय जोडी विक्रम र जोडीको यो पहिलो दर्शै थियो । विक्रमको कम्मर तलको शरिर चल्दैन । उनको सेवामा जुटेकी मनु अरु समय त मन बुझाएर बसेकी थिइन् । तर चाडपर्वले भने उनको धैर्य टुटाइदिन्छ । मनुले अन्तरर्जातिय विवाह गरेका कारण माइतिले मनुलाई स्वीकार गरेका छैनन् । आर्थिक समस्या झेलिरहेका उनीहरुले यो वर्षको दशैं रमाइलोसंग मनाउने योजना बनाएका थिए । तर त्यो योजना पनि उनीहरुको तुहियो । उनको आमालाई मानसिक रोग थियो । छोराको दुर्घटना भएपछि नै आमालाई त्यो समस्या देखिएको हो ।
त्यो समस्या उनको फेरी बल्झियो । दशैंको अघिल्लो दिन उनलाई पहिलाकै अवस्थामा पुगिन् । आमाले छोरालाई पनि चिन्न सकिनन् । आमालाई अस्पतालमा भर्ना गरेर दशैंमा टिका नलगाउने बिचार गरे । तर विदेशमा रहेका विक्रमका बुवाले आग्रह गरेपछि दशैंको रातो टिका लगाए । आमा औषधि खाएर लठ्ठ परेकी थिइन् । बुवाको आग्रह पछि लठ्ठ परेको आमालाई जबरजस्ती उठाएर टिका लगाएर तस्बिर खिचेको बताए । उनले भने, आमा औषधि खाएर लठ्ठ पर्नुभएको थियो । बुवाले मेरो लागि भएपनि टिका लगाइदेउ भनेपछि आमालाई जबरजस्ती उठाएर टिका लगायौं र बुवालाई फोटो खिचेर पठायौं ।
दुखमा पनि हाँस्न सक्नुपर्छ भन्ने सोँचेर आफुहरुले त्यस्तो दुखको बेलामा पनि दशैं मनाएको मनुको भनाई छ । मनुको आमाबुवाले पनि दशैंमा फोन गरेर राम्रोसंग बोलेका कारण मनु भने खुसी छन् । मनुको आमाबुवाले घर कहिले आउँछौ भनेर बोलाएका कारण निकै खुसी लागेको विक्रमले बताए । करिव दुईवर्ष अघि पोखरामा बाइक दुर्घटनामा परी पुरै शरिर नचल्ने अवस्थामा पुगेका २३ वर्षीय विक्रम सुनारसँग बैवाहिक बन्धनमा बाधिएकी हुन् मनु लामा। मनु उनको जीवनमा देवी बनेर आएकी छिन् भन्दा केहि फरक नपर्ला।
डाक्टरले उनलाई आत्मबल बढाउँन र धैर्य गर्ने सल्लाह दिएका छन्। उनको जीवनमा मनु आएपछि उनले आशाको किरण देखेका छन्। अहिले मनुको एक मात्र सपना भनेको विक्रमलाई आफ्नै खुट्टाले हिडेको देख्नु र आफ्नै हातले खाना खाएको देख्नु हो ।यो सपना पुरा गर्नको लागि उनीहरु साथ सहयोगको माग गरिरहेका छन्।